सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई छुट, व्यक्तिको जग्गामा सडक! - लण्डन काठमाडौँ
नेपाल समाचारMarch 10, 2020
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई छुट, व्यक्तिको जग्गामा सडक!
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा व्यक्तिको जग्गा मिचेर सार्वजनिक सडक बनेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सैनामैना नगरपालिका-४ स्थित मुर्गिया सिसौंडाडा सडकमा स्थानीय कृष्णबहादुर थापाको झन्डै ३ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक सडकका नाममा मिचिएपछि स्थानीयबासी र नगरपालिकाबीच विवाद चुलिएको हो।
थापाले आफ्नो जग्गा मिचिएको भन्दै सडकमै पर्खाल लगाएका छन्। नगरपालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा आफू पीडित बनेकोले सडकमा पर्खाल लगाएको उनले बताए। व्यक्तिको जग्गामा सडक र सार्वजनिक (फिल्ड नक्साको बाटो) मा घर बनेको भन्दै थापाले गत बुधबार सडकमै पर्खाल लगाएका हुन्।
यसअघि आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा सडकको नाममा अतिक्रमण भएको भन्दै थापाले तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा अदालतले सैनामैना नगरपालिकासहितलाई निजी जग्गामा सडक विस्तार नगर्न आदेश दिएको थियो। नगरपालिकाले उक्त आदेश पालना नगरेको थापाको भनाइ छ।
हाल कित्ता नं. २३२ को सार्वजनिक बाटोमा कित्ता नं. १७७०, ५१५, १३६९, १३७०, १०६७ र ७४० का जग्गाधनीहरू तुलसा बस्याल, डीलबहादुर खत्री, लालबहादुर रावल, पदमलाल श्रेष्ठलगायतले भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्। सडक मिचेका उनीहरूले जानकारी नपाएर यस्तो भएको जनाएका छन्। जबकि, नापीको फिल्ड बुकमा स्पष्ट रूपमा नै सडक देखाइएको छ।
मुर्गिया बजारबाट भित्री गाउँ जाने मूल सडकका रूपमा सञ्चालित उक्त सडक थापाले लगाएको पर्खालका कारण अवरुद्ध भएपछि त्यस भेगका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
सिसौंडाडाका ५ घरले करिब ३ कट्ठा जमिन मिचेका छन्। तर, नगरपालिकाले मिचेको जमिनका संरचना नहटाइ निजी जमिनमै सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ। आफ्नो जग्गामा सडक बढ्दै गएपछि थापाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सैनामैना नगरपालिका-४ सिसौंडाडामा रहेको सार्वजनिक बाटो कित्ता नं. २३२ को करिब ३ कट्ठा जमिन अतिक्रमणमा परेको हो। हाल कित्ता नं. २३२ को सार्वजनिक बाटोमा कित्ता नं. १७७०, ५१५, १३६९, १३७०, १०६७ र ७४० का जग्गाधनीहरू तुलसा बस्याल, डीलबहादुर खत्री, लालबहादुर रावल, पदमलाल श्रेष्ठलगायतले भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्। सडक मिचेका उनीहरूले जानकारी नपाएर यस्तो भएको जनाएका छन्। जबकि, नापीको फिल्ड बुकमा स्पष्ट रूपमा नै सडक देखाइएको छ।
sainamaina sadak bibad2
उनीहरूले सडक मिच्दा थापाको २७ धुर जग्गा सडकले खाएको छ। उनले आफ्नो जग्गा दिएर सडक विस्तार गर्न नसक्ने बताए। ‘दुःख गरे जोडेको सम्पत्ति सडकलाई दान गर्ने कुरा हुँदैन, नक्सा अनुसार सडक सडककै जग्गामा बनाइयोस्,’ थापाले भने।
लामो समयदेखि विवाका कारण यो सडक निर्माण बेला-बेलामा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। फिल्ड नक्सामा सडकको जग्गा नै अन्यत्र छ। यस विषयमा पटक-पटक थापाले न्याय माग्दै हारगुहार गरेपछि अख्तियार र नापीलेसमेत अनुसन्धान गरेर नगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशन नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको थापाको गुनासो छ।
नगरपालिकाले सडक मिच्नेलाई नै प्रश्रय दिँदै आफूलाई क्षतिपूर्ति भन्दै धुरको एक लाख रुपैयाँ दिने सहमति गराएको पीडित थापाले सुनाए। उक्त सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएकाले न्यायका निम्ति सडकमा पर्खाल लगाएर आफ्नो जग्गाको संरक्षण गरेको उनको भनाइ छ।
सैनामैना-४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले भने ५०/६० वर्ष पुरानो बाटो भएको र पछि नक्सा र फिल्डको जग्गामा फेरबदल हुँदा समस्या देखिएको बताए। उनले विवाद मिलाउनका लागि सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीकै रोहबरमा क्षतिपूर्ति दिने गरी सहमति भएको, तर थापाले पछि उक्त सहमति नमान्ने बताएको दाबी गरे।
‘विवाद मिलाउने गरी द्विपक्षीय सहमति गरिएको हो, तर अहिले फेरि बाटो बन्द गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको निकासका लागि हामी छलफलमा छौं।’ उनका अनुसार पीडित थापालाई सहमतिअनुसार जग्गा मिचिए बमोजिम २७ धुरको २७ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो।
पर्खाल निर्माणपछि सडक पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। यसले उक्त सडकहुँदै आवतजावत गर्ने त्यस भेगका स्थानीयलाई समस्यामा पारेको छ। फिल्ड नक्सा अनुसार सडक कायम गर्दा आधा दर्जन घर भत्काउनुपर्छ।
जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रभावमा परेर सडक मिच्ने घर भत्काउन आनाकानी गरेको स्थानीयको आरोप छ। घर नभत्काए थापासहित केही व्यक्तिको निजी जग्गामा नै ३० फुटे सडक बन्ने र उनीहरू घरबारविहीन बन्ने बताइएको छ।
नगरपालिकाले उक्त सडकको ८ सय मिटर यही आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे गर्ने योजना राखेको छ। जग्गा विवादले उग्र रूप लिँदा पनि नगरपालिकाले समस्या सुल्झाउन प्रभावकारी पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ।